အကြင်နာနန်းတော်: Nokia ဖုန်းတွေ မှာ မြန်မာဖောင့်နဲ့ မြန်မာလိုပေါ်အောင်လုပ်နည်း
လိပ်စာ = ဘန်းကောက်
August 05, 2011 - 10:53 PM
nokia 5233 ကိုမြန်မာဖေါင့်သွင်းခြင်လိုပါ..
12 Jun 11, 06:47 AM
linlinzaw: ကျွန်တော်ရဲ့ Nokia5800 ဖုန်းထဲကို 1. မြန်မာဖောင်နဲသုံးချင်ပါတယ် ၊ 2. အင်္ဂလိပ် မြန်မာ အဘိဓာန် ဆောဝဲကို ။ ရှာပေးပါ
ကိုကြီး နဲ့ လင်းလင်းဇော် တောင်းထားတဲ့ nokia5233 နှင့် Nokia5800 မှာ မြန်မာဖေါင့် သွင်းနည်းလေးပါ..ခုမှရှာဖွေပြီးဖြေပေးရလို့ စိတ်ဆိုးပါနဲ့နော်..
ဒါလေးက nokia5233 တွင်မှာမက
N92,N93, N95, N96, N97, N97 mini, X6, C7-00, E7-00, C5-03, C6. တွေမှာပါရပါတယ်ရှင့်...
software လေးကို download ဆွဲပြီးပြီဆိုရင် ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်လိုက်ပါ ။
ပြီးရင် သွင်းချင်တဲ့ မြန်မာဖောင့်ကို ဖုန်းရဲ့ sd card ထဲကို copy လုပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် ဖုန်းရဲ့ file manager ထဲကနေ၀င်ပြီး ခုနက sd card ထဲကို copy လုပ်ထားတဲ့ မြန်မာဖောင့်ကို C:\_data\_fontzoomer အောက်ကို ရွေ့လိုက်ပါ။
SymbianMyanmar v3.0 ပါ အဆင်ပြေသလိုဒေါင်းယူလိုက်ပါ။